मदनसँगका कहिल्यै नमेटिने ती मीठा सम्झना - Pahilo News
अल्पमत र मदनको सम्बन्ध
‘म निस्फिक्री र खला छु । महाधिवेशनको फैसलाअनुसार सबैले काम गर्नुपर्छ । जिते काम गर्ने, नजिते एनजिओमा जाने पक्षमा म छैन । आफूले ठीक ठानेको कुरा बहुमतलाई ठीक हो भन्ने लाग्यो भने पनि ठीकै छ, होइन भने आफूलाइ बेठीक लागेको कुरालाई बहुमतले ठीक ठान्यो भने त्यो पनि ठीकै छ । किनभने, त्यतिकै आकाश खसिहाल्दैन, धर्ती उल्टिहाल्दैन । बहस, छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने, त्यो निष्कर्षलाई व्यवहारको कसीमा पु¥याउने र जाँच्ने चक्रवत् तरिकाबाट मान्छेको ज्ञान, संघर्ष सबै चीज अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले मलाई आफ्नो मत विजयी होस् वा पराजयी, कुनै फिकर छैन ।’
यस्तो हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी र यस्ता थिए, उहाँका विचार । जतिवेला नेकपा (एमाले) एक हप्तापछि सम्पन्न हुने महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको थियो र नेताहरुवीच विचारको तहमा पानी बाराबारको स्थिति थियो, त्यतिवेला अर्थात २०४९ माघ ५ गते उहाँ हामीसँग टेपवार्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको त्यो विचार ‘म हारे पनि पार्टीमै रहन्छु’ शीर्षकअन्र्तगत ७ गतेको अंकमा प्रकाशित भयो । सोही अंकमा कमरेड सीपी मैनालीको बहुदलीय जनवादको खण्डन गरिएको एउटा सैद्धान्तिक लेखसमेत छापिएको थियो ।
मदनका साथ किशोर श्रेष्ठ, राजेन्द्र स्थापित र कमल कोइराला
मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम यतिवेलासम्म आइपुग्दा ‘नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम’ का रुपमा मात्र सीमित नरही नेकपा (एमाले) को साझा सिद्धान्त बनिसकेको छ । हिजोका बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमका अनुयायी र मदनका सहयोगीहरु यतिबेला अनेकन लबीमा बाँडिनुभएको छ । त्यसो त, त्यतिबेला पनि पार्टीभित्र ‘बहुदलीय जनवाद’, ‘परिमार्जित नौलो जनवाद (सीपी)’ र ‘नौला जनवाद (मोहनचन्द्र)’ सहित विभिन्न विचारको नाममा लवी नभएको होइन । तर, फरक त यति मात्र छ कि, त्यसवेला महाधिवेशनमा प्रस्तुत पाँचखाले विचारको आधारमा लवी देखिएको थियो भने यतिबेला निर्विकल्प मानिएको बहुदलीय जनवादभित्र पनि अनेकन लवी देखापरेको छ । त्यसको तरंग हालै सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पनि छलचल्किएकै हो ।
मदन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– ‘फरक मतलाई पार्टीको महाधिवेशनले यो ठीक छैन भनेर परास्त ग-यो भने त्यो फरक मत त परास्त भयो, फरक मतवाला त परास्त भएन नि ! फरकमतवाला कमरेडहरु पनि पार्टीका नेता हुन् र सदस्य हुन् । यसर्थ म त सबैलाई समेटेर लाने पक्षमा छु ।’
नेताहरुबीच लवी थियो र आरोप–प्रत्यारोप अनि कटुता पनि थियो । तर, मदन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– ‘फरक मतलाई पार्टीको महाधिवेशनले यो ठीक छैन भनेर परास्त ग-यो भने त्यो फरक मत त परास्त भयो, फरक मतवाला त परास्त भएन नि ! फरकमतवाला कमरेडहरु पनि पार्टीका नेता हुन् र सदस्य हुन् । यसर्थ म त सबैलाई समेटेर लाने पक्षमा छु । ’
अहिले ‘दृष्टि’ पुरानो अवस्थामा छैन । यसमा तीनचोटि विभाजन आइसकेको छ र म पनि ०५१ माघदेखि ‘दृष्टि’ मा छैन । तर, मदन कमरेडले शहादत प्राप्त गर्नुभएको यति समय नाघिसक्दा मैले आफू ‘दृष्टि’ मा कार्यरत रहँदाताका त्यस्ता प्रसंगलाई बिनापूर्वाग्रह यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ, जसले मदनको जीवनको अर्को पक्षलाई पनि राम्ररी उजागर गर्न सकून् । त्यो हो– उदारता र सहिष्णुताको पक्ष ।
यस्तै एउट प्रसंग– २०४९ मंसिर १ गते बुधबारको दिन । विहान सबेरै क्यामेरम्यान विजय सैंजु र म नक्सालस्थित मदनको डेरामा पुगेका थियौं, उहाँको फोटो खिच्न । कालो टोपी, खैरो कोट, पाइन्ट र स्वीटरमा हामीले चाहेअनुसार विभिन्न पोजमा उहाँको दुई रिल फोटो खिच्यौं । फर्कने बेलामा उहाँले भन्नुभयो– ‘सीपी र एमसी कमरेडको पनि फोटो खिच्नुहोला ।’
हामी त्यहाँबाट सीधै मंगलबजार गयौं र बागबजारस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यलय आइपुग्यौं । ती दुवै ठाँउमा गरी हामीले सीपी र मोहनचन्द्रका अरु दुई रिल फोटो खिचेका थियौं । पछि महाधिवेशनको संघारमा ‘सूर्य’ मासिक छापिने भयो । केही साथी हुनुहुन्थ्यो, जो आवरणमा मदनको मात्र फोटो राख्न चाहनुहुन्थ्यो । यो कुरा सुनेपछि मदनले भन्नुभयो– ‘त्यसो होइन, कभरमा तीनैजनाको फोटो राख्न बेस हुनेछ ।’ ‘सूर्य’ उहाँले भनेअनुसार नै छापियो । त्यतिबेला ‘दृष्टि’ एमालेको आधिकारिक अखबार थियो । यति हुँदाहँदै पनि मदन कमरेडले हामीलाई कहिल्यै अल्पमतलाई त्यसमा ठाउँ नदिन निर्देशन दिनुभएन । यदि त्यस्तो निर्देशन हुन्थ्यो भने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सीपी कमरेडको लेख, अशोक राई र मोहनचन्द्रको अन्तरवार्ता त्यसमा छापिने थिएन ।
एउटा प्रसंग– यो चाहिं २०४८ मंसिर १६ गतेको हो । नक्सालको डेरामा मदन कमरेडले ‘दृष्टि’ लाई एउटा अन्तरवार्ता दिनुभयो र मलाई भन्नुभयो– ‘आजै गएर सीपीलाई भेट्नुहोस र अन्तरवार्ताको सार बताएर उहाँको प्रतिक्रिया पनि संकलन गर्नुहोस ।’ मैले त्यसै गरेँ ।
त्यस्तै, अर्को एउटा प्रसंग– यो चाहिं २०४८ मंसिर १६ गतेको हो । नक्सालको डेरामा मदन कमरेडले ‘दृष्टि’ लाई एउटा अन्तरवार्ता दिनुभयो र मलाई भन्नुभयो– ‘आजै गएर सीपीलाई भेट्नुहोस र अन्तरवार्ताको सार बताएर उहाँको प्रतिक्रिया पनि संकलन गर्नुहोस ।’ मैले त्यसै गरेँ । पर्सिपल्ट त्यो अन्तरवार्ता छापियो, जसमा एउटा प्रश्नको उत्तर यस्तो थियो, ‘कमिटीले महासचिब मदन होइन, अरु कोही हुनुपर्छ भन्यो भने त्यसमा मेरो समेत सहमति रहनेछ, होइन, तैंले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने फैसला ग-यो भने शीर निहुराएर त्यो निर्णयलाई मान्न र बोक्नका निम्ति पनि म तयार छु । यो मेरो भावना अभ्यासको विरुद्ध कुनै ढंगले षड्यन्त्र, तिकडमबाजी र अनुचित खालका तौरतरिका प्रयोग गरेर कोही आउँछन् भने त्यस्तो बेला जस्ताको तस्तै टक्कर गर्नको निमित्त एकजना पार्टी सदस्यको हैसियतमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा कुनै आश्चर्यको विषय हुने छैन ।’
यो अन्तरवार्ता ‘मेरो भावनाविरुद्ध कसैले षड्यन्त्र गर्छ भने म टक्कर लिन तयार छु’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो र समग्र अन्तरवार्ता नपढीकन शीर्षक मात्र पढेर निष्कर्ष निकाल्नेहरुका निम्ति यो अत्यन्त चर्को अन्तरवार्ता थियो । उक्त अन्तरवार्तालाई लिएर पार्टीभित्र ठुलो विवाद उत्पन्न भयो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै पनि चर्काचर्की पर्न थाल्यो । झलनाथ, सीपी र माधवलाई पनि यो प्रकरणमा मुछ्ने काम भयो ।
यो अन्तरवार्ता ‘मेरो भावनाविरुद्ध कसैले षड्यन्त्र गर्छ भने म टक्कर लिन तयार छु’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो र समग्र अन्तरवार्ता नपढीकन शीर्षक मात्र पढेर निष्कर्ष निकाल्नेहरुका निम्ति यो अत्यन्त चर्को अन्तरवार्ता थियो । उक्त अन्तरवार्तालाई लिएर पार्टीभित्र ठुलो विवाद उत्पन्न भयो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै पनि चर्काचर्की पर्न थाल्यो । झलनाथ, सीपी र माधवलाई पनि यो प्रकरणमा मुछ्ने काम भयो । तर, मदन कमरेड नै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसले कसैलाई दोष दिनुभएन । बरु, आफू एक्लै हुँदा पनि स्पष्टीकरण दिइनै रहनुभयो । उहाँलाई मैले माइक्रोक्यासेट हस्तन्तरण गरेंँ । त्यो उहाँले सबैलाई सुनाउनुभयो । यदि मदनमा त्यस्तो सहिष्णुता नहुँदो हो त मलाई लाग्छ, त्यतिबेला उहाँमाथि औंला ठड्याउने धरै जनाको महाधिवेशनमा पत्तासाफ भइसक्ने थियो ।
पार्टीका नीतिहरुको व्याख्या गर्दा कडाइका साथ, तार्किक शैलीमा र चेतावनीको भाषामा प्रस्तुत हुने मदनको बानी थियो । तर, व्यवहारको मामिलामा भने उहाँ एमालेका नेतामध्ये सबैभन्दा नरम लाग्नुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यकालमा अल्पमतमाथि जे जति ‘दमन’ भयो, ती सब उहाँलाई घेरेर बस्ने कडा स्वभावका मानिसहरुको काम थियो । मदनले हामीलाई छाडेर जानुभयो । तर, उहाँलाई घेरेर बस्नेहरु अझैं पार्टीभित्रै छन् ।
वि.सं २०३० को दशकतिर पश्चिम नेपालमा सशक्त ढंगबाट कार्यरत एउटा कम्युनिष्ट समूहको नाम ‘मुक्तिमोर्चा’ समूह हो र मदन कमरेड त्यसको एक हस्ती हुनुहुन्थ्यो । दिवंगत कमरेड जीवराज आश्रित, मोदनाथ प्रश्रित, सिद्धिनाथ ज्ञवाली, देवेन्द्र घिमिरे र भीमनारायण थारु पनि सोही समूहमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिवेला विशेषगरी पूर्वी नेपालमा क्रियाशील अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (माले) अर्थात् कोकेले मुक्तिमोर्चालाई २०३४ भाद्र १४ मा आफूमा समाहित गराएको थियो । ठूलाबडाको मिचाइ कति पीडादायक हुन्छ भन्ने कुरा यो घटनाबाट पनि मदनले अनुभूत गर्नुभएको थियो । यसैकारण पनि उहाँ अल्पमतप्रति कहिल्यै असहिष्णु हुनुभएन भन्ने म ठान्दछु ।
आदरणीय नेताद्वय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुःखद् अवसान भएको यति समयपछि उहाँहरुसँग सम्बन्धित हरफ लेख्न बस्दा मेरा हात कामिरहेका छन् । यसअघि भर्खर ०५३ मा ‘जनआस्था’का लागि लेख्दा यस्तै भएको थियो । त्यसबेला ‘दृष्टि’ का मेरा पुराना सहकर्मी तथा ‘प्रतिपक्ष’ का तत्कालीन सम्पादक अग्निशिखा सामुन्नेमै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई भनिरहनुभएको थियो, ‘हामी ‘दृष्टि’ मा छँदाका अविस्मरणीय कुराहरु सम्झेसम्म लेख्नोस् । नेताद्वयसँग समेत सम्बन्धित ती अप्रकाशित अध्यायहरु जस्ताको तस्तै जनसमुदायसमक्ष राखिदिनु पनि हाम्रोतर्फबाट उहाँप्रति एकखाले श्रदाञ्जलि हुनेछ ।’ बिडम्वना, आज मदन–आश्रितबारे लेख्न बसिरहँदा अग्नि पनि हामीसँग हुनुहुन्न ।
‘दृष्टि’ मा हुँदा नेताद्वयको राम्रो पक्ष मात्र थाहा पाइएको छैन, अपितु उहाँहरुका केही स्वभावगत कमजोरी पनि जान्ने मौका पाइएको छ । र, म केही प्रसंगलाई यहाँ लिपिबद्ध गर्न खोज्दैछु ।
आश्रित कमरेड खरो स्वाभावको हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग हाकाहाकी मेरो यति समाचार आओस् भन्ने माग राख्नुहुन्थ्यो । त्यतिवेला हिमालयन इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी (एचआईडी) नामक एउटा एनजिओ एमाले पंक्तिभित्र आतंकको पर्याय बन्न पुगेको थियो । प्राध्यापक मंगलसिद्धि मानन्धर र प्रकाशराज सापकोटाको अगुवाइमा खुलेको उक्त संस्थालाई अमेरिकी सहयोग प्राप्त थियो ।
आश्रित कमरेड खरो स्वाभावको हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग हाकाहाकी मेरो यति समाचार आओस् भन्ने माग राख्नुहुन्थ्यो । त्यतिवेला हिमालयन इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी (एचआईडी) नामक एउटा एनजिओ एमाले पंक्तिभित्र आतंकको पर्याय बन्न पुगेको थियो । प्राध्यापक मंगलसिद्धि मानन्धर र प्रकाशराज सापकोटाको अगुवाइमा खुलेको उक्त संस्थालाई अमेरिकी सहयोग प्राप्त थियो । उसले जिल्ला–जिल्लामा गएर राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने कार्यलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गरिरहेको थियो । त्यस कार्यमा एमालेकै तत्कालीन ‘अल्पमत’ पक्षका कार्यकर्ताको पनि व्यापक संलग्नता थियो । एक अर्थमा भन्ने हो भने कतिपय रोजगारीका निम्ति त्यो राम्रो अवसर पनि थियो ।
एचआईडीले आफ्नो कामलाई सरल र सहजरुपमा सम्पन्न गर्न एमाले केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला कमिटीहरुको नाममा एउटा पत्र प्राप्त गर्न सफल भयो । पत्रमा एचआईडीलाई सहयोग गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, त्यो कुरा संगठन विभाग प्रमुख क. जीवराज आश्रितलाई मन परेको थिएन । उहाँको विचारमा एचआईडीको कार्यका पछाडि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने अमेरिकी नियत लुकेको थियो र त्यसलाई बेलैमा क्रस चेकिङ नगरिएको खण्डमा परिणाम नकारात्मक पनि हुन सक्थ्यो ।
यिनै निष्कर्षसहित उहाँले २०५० बैशाख २५ गते बागबजारस्थित केन्द्रीय कार्यलयको आफ्नो कार्यकक्षमा तुरुन्त आउन मलाई निर्देशन निुभयो र आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध गराउदै एउटा लेख तयार पार्ने जिम्मेवारी सुम्पनुभयो । १७ वर्ष जेलजीवन यापन गरेर निस्कनुभएका तत्कालीन कार्यालय सहायक मनकुमार गौतम पनि त्यतिबेला त्यहीं हुनुहुन्थ्यो । ‘दृष्टि’को २८ गतेको अंकमा संयम शर्माको नामबाट ‘होस गर्नुहोस्, तपाईकहाँ पनि आउदैछ हिड’ शीर्षकमा आधा पेजको लेख छापियो । सोही अंकमा एमालेका सम्पूर्ण मातहत कमिटीहरुको नाममा एचआईडीसँग सतर्क रहन सूचनासमेत जारी गरिएको थियो । र, दुर्भाग्यको कुरा त्यसको ठीक पाँच दिनपछि दासढुंगामा कमरेड आश्रित मारिनुभयो ।
चिनियाँ दूतावासले विभिन्न नेताका भाइ–छोरालाई साँस्कृतिक कोटानन्तर्गत आफ्नो देशमा पढ्न पठाउने व्यवस्था मिलाएको थियो र मदन कमरेडको प्रयत्नमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं, १३ का सदस्य जीवनराम मानन्धरकी छोरीलाई पनि त्यो अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, त्यसमा एमालेकै एकजना नेताको आँखा प-यो र मदन कमरेडलाई फकाएर जीवनराजकी छोरीको नाम काटी उनै नेताकी छोरीलाई चीन पठाइयो ।
मदन भण्डारी सोझो हुनुहुन्थ्यो र आफूले मन पराएका मानिसलाई उत्तिकै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको यही सोझोपनको फाइदा उठाएर उतिबेला धेरैले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरेका थिए । एउटा सानो उदाहरण त्यतिबेला चिनियाँ दूतावासले विभिन्न नेताका भाइ–छोरालाई साँस्कृतिक कोटानन्तर्गत आफ्नो देशमा पढ्न पठाउने व्यवस्था मिलाएको थियो र मदन कमरेडको प्रयत्नमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं, १३ का सदस्य जीवनराम मानन्धरकी छोरीलाई पनि त्यो अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, त्यसमा एमालेकै एकजना नेताको आँखा प-यो र मदन कमरेडलाई फकाएर जीवनराजकी छोरीको नाम काटी उनै नेताकी छोरीलाई चीन पठाइयो ।
अर्को प्रसंगमा केही मानिसले मदन कमरेडलाई फेरि फँसाइदिए । उनीहरुको लहलहैमा लागेर उहाँले संस्कृत भाषाको अनिवार्यतासम्बन्धी एक प्रस्तावमा सही गरिदिनुभयो । त्यही कुरालाई लिएर राष्ट्रिय सभागृहमा ठूलो हंगामा हुँदा उहाँ हल छाडे हिँड्न बाध्य हुनुभयो । पछि आफू फसेको कुरा महसुुस भएपछि मदन कमरेडले हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभयो ।
२०४९ चैत दोस्रो सातातिरको कुरा हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निम्तोमा एमालेको १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन जाने तयारी सुरु भयो । मदन टोलीमा पत्रकारलाई पनि लान चाहनुहुन्थ्यो । त्यहाँ पनि खेल सुरु भयो । एमालेको कुनै एक शीर्षस्थ नेताले उहाँलाई उल्क्याइदिए– ‘पत्रकारलाई लान हुन्न, आएर जम्मै कुर लेखिदिइहाल्छन् नि !’ पछि भ्रमण दलको अन्तिम नामावली तयार भयो, जसमा पत्रकारको कोटामा ती नेताको नाम थियो ।
२०४९ असार १० गतेको अंकमा एउटा भाषिक त्रुटिसहितको समाचार छापियो । समाचारको शीर्षक थियो– ‘रानी दिल्ली गइन् ।’ बुधबार बिहानै उहाँले त्यो समाचार पढ्नुभयो र उतिखेरै हाम्रो कार्यालयमा फोन गरेर भन्नुभयो– ‘त्यो लेखाइ ठीक भएन । त्यही समाचारलाई शिष्ट र मर्यादित भाषामा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो ।’
मदन कमरेडले हामीलाई जहिले पनि ‘दृष्टि’ मा छापिने कुनै पनि लेख र समाचार कमजोर र गैरजिम्मेवार नहोस् भन्ने सुझाव र मन लगाएर काम गर्ने प्रेरणा दिइ नै रहनुभयो । बहुदल आउनासाथ २०४७ बैशाख १७ गते पार्टी प्रवक्ताका रुपमा पहिलो अन्तरवार्ता दिएको दिनदेखि हामीबीच सुरु भएको पत्रकार र नेताबीचको सुमधुर साइनोमा उहाँले कहिल्यै तिक्तता आउन दिनुभएन । हामीले बिराएर लेख्दा पनि उहाँले सच्याउन सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, गाली गर्नुहुन्थेन । २०४९ असार १० गतेको अंकमा एउटा भाषिक त्रुटिसहितको समाचार छापियो । समाचारको शीर्षक थियो– ‘रानी दिल्ली गइन् ।’ बुधबार बिहानै उहाँले त्यो समाचार पढ्नुभयो र उतिखेरै हाम्रो कार्यालयमा फोन गरेर भन्नुभयो– ‘त्यो लेखाइ ठीक भएन । त्यही समाचारलाई शिष्ट र मर्यादित भाषामा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो ।’
२०४९ भदौ ३ गतेको अंकमा ‘सेनाद्वारा खबरदारी’ शीर्षकअन्र्तगत अग्निशिखा र मेरो नाममा मुख्य समाचार छापियो । यसमा मदन कमरेडले आपत्ति नै त जनाउनुभएन, तर सेनाको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै समाचारलाई आधिकारिक र चित्तबुझ्दो बनाउनेतर्फ आइन्दा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव रह्यो ।
त्यतिबेला बाढीपीडितहरुको उद्धारका नाममा सुरक्षा परिषद्को निर्णयबेगर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय वायुसेनाको दुईवटा हेलिकोप्टर मगाउनुभएको थियो र शाही नेपाली सेनाले ती हेलिकोप्टरलाई काठमाडौं विमानस्थलमै रोकेर राखेको थियो । सेना प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट थिएन । अर्कातिर टनकपुर प्रकरण पनि चर्किरहेको बेला थियो । त्यस्तो स्थितिमा शाही नेपाली जंगी अड्डाले भर्खरै प्रकाशित गरेको ६६० पेजको किताब ‘नेपालको सैनिक इतिहास’ हाम्रो हात परेको थियो ।
त्यसकै आधारमा हामीले समाचार लेखेका थियौं । उक्त पुस्तकको प्रस्तावनामा भनिएको थियो, ‘फौजको संगठन गर्दा विस्तारवादको परिकल्पना र विस्तारवादीको सहयोगका लागि प्रयोग हुने नै संरचना एकदम गरिएको थिएन ।’ भनिरहनु नपर्ला, कुरा सुनिसकेपछि मदन कमरेडले गाली हैन, हाम्रो प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
टनकपुर विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको र सर्वोच्च अदालतको फैसला सन्निकट रहेको बेला मदन कमरेड ‘दृष्टि’ को अतिरिक्तांक प्रकाशित होस् र त्यसले जनतालाई सुसूचित गर्न सकोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सुझावअनुसार, २०४९ कात्तिक १५ गते शनिबार अतिरिक्तांक छापियो, जसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सरकार पराजित हुने संकेतसहित अन्तवार्ता दिनुभएको थियो ।
उता, ०४९ चैत ७ र ८ गते विराटनगरमा सम्पन्न हुने पत्रकार संघको १६ औँ महाधिवेशनमा कसरी प्रस्तुस्त हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँले हामीलाई बोलाएर सरसल्लाह गर्नुभएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रदीप नेपाल, शम्भु श्रेष्ठ, गोपाल थपलिया र म थियौँ, रघुजी हुनुहुन्थेन । उहाँ विराटनगर गइसक्नु भएको थियो । र, उहाँलाई आफूले टिकट पाउने कुरामा विश्वास पनि थिएन । तर, त्यही छलफलले उहाँलाई महासचिव बनाउने र कांग्रेसको ३६ से समूहसँग मिलेर चुनाव लड्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पनि भयो । तर, अघिल्लो वर्ष हामीबीच त्यस्तो सरसल्लाह हुन सकेन र त्यसैकारण अपेक्षा गरिए जस्तो परिणाम पनि हात लाग्न सकेन ।
यो पनि ०४९ सालकै कुरा हो । कात्तिक २१ गतेको दिन थियो । पाचौँ महाधिवशेनको तयारी र बहस उत्कर्षमा पुगेको त्यो बेला ‘दृष्टि’ले मदन कमरेडको अन्तवार्ता लिने निधो ग¥यो । अन्तवार्ता लिखित थियो । र, २२ गते मदनले फोन गरेर सोध्नुभयो ‘कम्प्युटरमा गइसक्यो ?’ गैसकेको कुरा थाहा पाएपछि उहाँले भन्नुभयो– ‘जहाँ–जहाँ बहुदलीय जनबाद’ उल्लेख छ, त्यहाँ–त्यहाँ जनताको थपिदिनुहोला ।’ र, २६ गते ‘कालिदासको ‘क’ पढेर जनताको बहुदलीय जनवाद बुझिन्न’ शीर्षकमा उक्त अन्तवार्ता छापिएको दिनदेखि उहाँद्वारा प्रस्तुत नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम विधिवत् नामाकरण ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ रहन गयो ।
(मदन भण्डारीका प्रिय र उहाँसँग निकट रही काम गरेका बरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठले पाँच वर्षअघि लेख्नुभएको लेखलाई हामीले सामान्य सम्पादनसहित प्रस्तुत गरेका हौँ । शीर्षक हाम्रो हो ।– सम्पादक)